Basic Yoga For Stress Relief – Ufit Myanmar
Basic Yoga For Stress Relief
Stress-Free Zone လေးဆီသွားကြမယ်
အလုပ်မှာမပျော်တော့ဘူး၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းများလိုက်တာ၊ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီး အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခြေပစ်လက်ပစ်ပဲ။ အဆိုးဆုံးကအလုပ်သွားရမယ့် မနက်ဖြန်တွေတိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းကြောက်ရွံ့လာတတ်ပြီ။
ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းခံစားနေရတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့။ ဒီအဖြစ်ကနေ မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်။
တကယ်တော့ မှန်ကန်တဲ့ဖြည်လျှော့ခြင်း၊ မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ လေ့ကျင့်နည်းတွေသာရှိရင် ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုများတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဖြစ်ဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလူတိုင်းအတွက် UFit က Yoga for workplace series လေးကိုခွဲထုတ်မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ Concentration ကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုမို Focus လုပ်နိုင်ပြီး Productivity ကောင်းလာစေဖို့၊ စိန်ခေါ်မှုတိုင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့၊ တစ်နေ့တာနွမ်းနယ်လာသမျှဖြေဖျောက်ပြီး Energy ပြန်ပြည့်စေဖို့၊ စိတ်အညစ်အကြေးတွေ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပစ်နိုင်စေဖို့၊ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတူ နေ့ရက်တိုင်းကိုပေါ့ပါးစွာဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ အတွက် ဒီ Series လေးကတာဝန်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။
ကဲ…သူငယ်ချင်းတွေအတူတူ Stress-Free Zone လေးဆီသွားကြမယ်နော်။
The course will expired within 60 days once your account activated.
Basic Yoga For Stress Relief?
Stress-Free Zone လေးဆီသွားကြမယ် အလုပ်မှာမပျော်တော့ဘူး၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းများလိုက်တာ၊ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီး အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခြေပစ်လက်ပစ်ပဲ။ အဆိုးဆုံးကအလုပ်သွားရမယ့် မနက်ဖြန်တွေတိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းကြောက်ရွံ့လာတတ်ပြီ။ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းခံစားနေရတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့။ ဒီအဖြစ်ကနေ မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်။ တကယ်တော့ မှန်ကန်တဲ့ဖြည်လျှော့ခြင်း၊ မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ လေ့ကျင့်နည်းတွေသာရှိရင် ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုများတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဖြစ်ဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကလူတိုင်းအတွက် UFit က Yoga for workplace series လေးကိုခွဲထုတ်မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ Concentration ကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုမို Focus လုပ်နိုင်ပြီး Productivity ကောင်းလာစေဖို့၊ စိန်ခေါ်မှုတိုင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့၊ တစ်နေ့တာနွမ်းနယ်လာသမျှဖြေဖျောက်ပြီး Energy ပြန်ပြည့်စေဖို့၊ စိတ်အညစ်အကြေးတွေ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပစ်နိုင်စေဖို့၊ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတူ နေ့ရက်တိုင်းကိုပေါ့ပါးစွာဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ အတွက် ဒီ Series လေးကတာဝန်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဲ…သူငယ်ချင်းတွေအတူတူ Stress-Free Zone လေးဆီသွားကြမယ်နော်။
Day 1: Introduction to Yoga16:00
Day 2: Sunset Restorative Flow36:58
Day 3: Sunrise Metta Flow42:30
Day 4: Self-Love Flow00:48:55
Day 5: Joint Movement00:14:16
Day 6: Breathing Exercise00:19:21
Day 7: Rest ( No Class )
Day 8: Sun Salutation Sequences00:33:02
Day 9: Standing Balance Flow00:33:02
Day 10: Hatha Yoga – Backbend Series44:35
Day 11: Joint Movement00:19:21
Day 12: Understanding Stress & Embracing Breath00:23:20
Day 13: Gratitude Grounding ( Meditation )00:19:53
Day 14: Rest ( No Class )
Day 15: Self-Love Flow48:55
Day 16: Sunrise Metta Flow00:42:30
Day 17: Sunset Restorative Flow36:58
Day 18: Hatha Yoga & Meditation00:48:49
Day 19: Yin Yoga & Meditation00:52:16
Day 20: Rest ( No Class )
Day 21: Guided Relaxation00:08:43
Day 22: Hatha Yoga & Meditation00:52:47
Day 23: Yin Yoga & Meditation00:45:33
Day 24: Hatha Yoga & Meditation00:45:34
Day 25: Hatha Yoga & Meditation00:48:49
Day 26: Yin Yoga & Meditation00:52:16
Day 27: Rest ( No Class )
Day 28: Joint Movement00:19:21
Day 29 :Guided Relaxation00:08:43
Day 30: Gratitude Grounding ( Meditation)00:19:53
Congratulation : Lessons Completed
12,000Ks 9,500Ks / 60 days